Internet Speed အဆ ၂၀ စီမံကိန်း — MYSTERY ZILLION
Internet Speed အဆ ၂၀ စီမံကိန်း
March, April လောက်က Internet Speed ကို မေလထဲမှာ အဆ ၂၀ တိုး သွားမယ်ဆိုပြီး ... ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ April တုန်းက တစ်လလုံး Internet သုံးမရအောင် Speed တွေကျနေခဲ့တယ်။ ရေအောက် Cable ပြင်နေတယ်။ Speed မြှင့်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ .........
အဲဒီတုန်းကတော့ ... သြော် .. သူတို့ Upgrade လုပ်နေတယ်လေဆိုပြီး နားလည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ... အခု မေလကုန်လို့ ဇွန်လဲကုန်တော့မယ် ... ဇူလိုင်လဲရောက်တော့မယ်။ ဘယ်မှာလဲ အဆ ၂၀။
တစ်နေ့တစ်နေ့ Connection Down နေတာ ကြာပေါ့။ ကျနော် မော်ကျွန်းမှာတုန်းက Kaspersky Database Update ကို Download ဆွဲတာဘယ်လိုမှဆွဲမရခဲ့လို့ အဲမှာ Update တောင်မလုပ်ပေးခဲ့ရဘူး။
မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရင် မပြောတာကောင်းတယ်။ ပြောပြီးရင်လဲ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့။ လုပ်ရင်းနဲ့ မရတော့လို့ဆိုလဲ အများသိအောင် ကြေညာချက်ထုတ်ပေါ့ ...... ခုတော့ ဘာတစ်ခုမှကို မလာတော့ဘူး။
တစ်နေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါ ....ဆိုတဲ့ သီချင်းဆိုရမှာလား ...
နက်ဖြန်သို့မဟုတ် ဘယ်သောခါ ... ဆိုတဲ့ သီချင်းဆိုရမှာလား ...
မေခလာ လိုပဲ .... ~~~ ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ ... ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ ... ပြန်ပေတော့ ~~~ ပြန်ပေတော့ ~~~ .... အဲလိုလား .... :106:
အင်းပြောပြန်ယင်လည်း အောင်မင်းပဲ လွန်ရာကျမယ်နော်...ဒီအစီုရက ဒီလိုပဲ ပြောနေကြဆိုတာ လူတိုင်းသဘောပေါက်ကြပါတယ်..သူလည်း ပြောချင်တာပြော ပြီး ယင် လုပ်ချင်မှ လုပ် ..ဒါနဲများ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ မူကြမ်းကို ၉၉.၈%ကျော် ထောက်ခံချက်ရထားသလေး ဘာလေနဲ့ ...ယုံချင်စရာကို မပြောတာ ပြည်သူတွေကိုတင်မဟုတ်ပါဘူး..နိုင်ငံတကာကိုပါ..ဒီလိုပဲ ပြောနေကြလေ...:d( နော် ဘာမှ မပြောခဲ့ပါဘူးနော်...)
အဲဒီ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့တော့ ကို Alexander ရယ်.....
စိတ်ထဲမှာ ပိုးစိုးပက်စက်ကို ဆဲ... ဆဲ မိနေလို့ပါ...:D
သြော်.. ကို Alexender ကြီးကလည်း သိသိကြီးနဲ့ မပြောနဲ့လေ ....ဒါမြန်မာပြည်လေ .. ချက်ချင်း အဆ(20) မတိုးဘူးလို့ဘယ်ပြောလို့ရမှာလဲ..သိဒ္ဒိတွေ..ပါ၀ါတွေနဲ့ချက်ချင်းတိုးချင်တိုးသွားမှာပေါ့.. သူများနိုင်ငံတွေမှာတောင် .. 1gbps တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ..အင်း.. ကျွန်တော်ကတော့ ဗျာ .. သိပ်ရှည်ရှည်ေ၀းေ၀းဘယ်သူ့မှ အပြစ်မမြင်ချင်တော့ဘူး .. မြင်ရင်လဲဒီထက်ပိုဆိုးပြီး .. ကိုယ်ဘဲခံရဖို့ကြီးဘဲ..အားလုံးကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်စီတော့ရှိကြမှာပေါ့ .. ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ .. အရင်ကထက်တောင် .. speed က ပိုကျလာသေးတယ် .. အထူးသဖြင့် upstream တွေ downstream တွေ လုပ်တဲ့အခါ မှာ ပိုသိသာတယ် .. ဒါပေမဲ့ဗျာ .. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ .. ဒီလိုဘဲသွားကြရမှာဘဲပေါ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bro ရေ ... ဒါပေမဲ့ ... ဒီမှာ Politic မပြောရဘူးတဲ့ ... Admin တွေကပြောထားတယ် ... ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ် ... ကျနော်တို့ MZ လေး အပိတ်ခံရင် အသဲကွဲမှာ ...
အဲဒါကြောင့် ကျနော်လဲ မပြောဘူး ...
Connection တွေက အရင်ကထက်တောင် ပိုကျလာနေလို့ .... ဘယ် အချိန်လောက်မှာ ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုပြီး သိချင်လို့ ... Thread တင်လိုက်တာ။
အနဲဆုံးတော့ Information လေး Share လို့ရအောင်ပေါ့။
ကျနော် မော်ကျွန်းမှာ IPStar နဲ့ သုံးတာ ..... အရင်ကတော့ ရန်ကုန်က ADSL လိုင်းတွေထက်ပို မြန်တယ်။ ကျနော် ရန်ကုန် ပြန်လာရင် Internet ဆိုင်မှာ မသုံးတတ်တော့ဘူး ... အရမ်းနှေးနေသလို ခံစားရလို့ .... ခုတော့ ကိုယ်ကပို ပြီးဆိုးနေလို့လေ.... .....
အစ်ကိုရယ် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ လိမ်နေတယ်ဆိုတာ သိရက်သားနဲ့များ အစ်ကိုရေ
အစ်ကို သီချင်းဆိုချင်ရင်တော့ မေခလာရဲ့ ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ ပြန်ပေတော့ ဆိုချင်ဆို။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုသီချင်းလေ ပျော်စရာဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာမှာ မရှိပါ ဆိုတာကို ဆိုချင်ဆိုပေတော့ အစ်ကိုရေ
အစ်ကိုရယ် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ လိမ်နေတယ်ဆိုတာ သိရက်သားနဲ့များ အစ်ကိုရေ :d :d :d
အစ်ကို သီချင်းဆိုချင်ရင်တော့ မေခလာရဲ့ ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ ပြန်ပေတော့ ဆိုချင်ဆို။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုသီချင်းလေ ပျော်စရာဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာမှာ မရှိပါ ဆိုတာကို ဆိုချင်ဆိုပေတော့ အစ်ကိုရေ :65: :65:
သိပြီ..သိပြီ... မေလ မတိုင်ခင်က ကျောရိုးကြီး ပြင်နေတယ်ဆိုပြီး အဆ ၂၀ နှေးသွားတယ်.. အော်... ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားတော့ အဆ ၂၀ မြန်တာပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား.... အဆ ၂၀ မြန်တယ်ဆိုတာ သေချာအောင် အရင်ဆုံး အဆ ၂၀ ပြန်နှေးလိုက်တယ်လေ.... :d
ကျားများဟာ သားကောင်ကို ခုန်အုပ်တော့မယ်ဆိုရင် နောက်ကို ခြေတစ်လှမ်းလောက်ဆုတ်လိုက်သလိုပေါ့ဗျာ..
ဟီး ဟီး . . ဒါပေမယ့် ဒီကျားကတော့ ရှေ့မရောက်လိုက်ရပါဘူးဗျာ။
မုဆိုးက ရှေ့လေး ဘေးခြောက် နောက်နှစ်ယောက် ပစ်သူပါမကျန် အကုန်မှန်တဲ့ တူမီးသေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်တာဗျ။
p.s - ကိုအလှည့်စန္ဒားယားရေ ဒီစာတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါ၀ူးနော်။
Internet speed တွေ discount ရမယ်
Internet speed တွေ discount ရမယ်.....
ဒီ Project ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 2008 ခုနှစ် အကုန်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီး စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် စတင်တဲ့ ရက်တွေ ဟာ နောက်ကို ရွှေ့လာခဲ့တာ 2009 မေလ အလယ်လောက်မှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် အလျှင် အမြန်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ ဆန်းမှာ အင်တာနက် တွေဟာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာ က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဟာ ရေတို စီမံကိန်း တစ်ခု တော့ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။ အပင်တစ်ပင်စိုက်သလိုပေါ့။ အဖိုးစိုက်ရင် မြေးစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စီမံကိန်းဟာဆိုရင်လည်း အဆ 20 မက မြန်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြေးလက်ထက်ထိတော့ စောင့်ရမယ်.........................................................
အဲဒီတုန်းကတော့ ... သြော် .. သူတို့ Upgrade လုပ်နေတယ်လေဆိုပြီး နားလည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ... အခု မေလကုန်လို့ ဇွန်လဲကုန်တော့မယ် ... ဇူလိုင်လဲရောက်တော့မယ်။ ဘယ်မှာလဲ အဆ ၂၀ ။
Dr.know ကြားခဲ ့ဖူးတဲ့စီမံကိန်းတခုအကြောင်း အလျဉ်းသင် ့တာနဲ ့ဒီမှာပြောပြမယ် ။
တခါတုန်းက ... ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ တနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ ဆိုဗီယက်(ရုရှား)က လက်ဆောင်ရထားတဲ့Computer တစုံရှိတယ်လေ ။
(အဲ ့ဒီတုန်းက ခေတ်အမီဆုံးပေါ ့) ။ တနေ ့မှာ ခေါင်းဆောင်ကြီးက နိုင်ငံခြားပြန် Computer
ပညာရှင်တွေကို ခေါ်ပြီး .....
ခေါင်းဆောင်ကြီး> ငါ ့ရဲ့ဆိုရှယ်လစ် စီမံကိန်းကြီး ဘယ်အချိန်အောင်မြင် ပြီးမြောက်
မလဲဆိုတာကို ဒီ Computer ကြီးနဲ့တွက်ချက်ကြည် ့စမ်း ... ့
ဆိုပြီး အမိန် ့ပေးတယ်လေ ။
ပညာရှင်များလည်း နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဆိုရှယ်လစ်စီမံကိန်းရဲ ့အချက်အလက်တွေကို Computer ကြီးမှာ ဖြည် ့သွင်းတွက်ချက်ကြည် ့လိုက်တော့ အဖြေ 41 ရတယ်လေ ။ ( ရက် ၊ လ ၊နှစ် ဘာမှ မပါဖူး ) ။
ပညာရှင်များလည်း ရတဲ ့အဖြေကို ခေါင်းဆောင်ကြီးထံတင်ပြတော့...
ခေါင်းဆောင်ကြီး> အဖြေက 41 ဆိုတော့စီမံကိန်းကို 41 ရက်နဲ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ
မဖြစ်နိုင်ဖူး ။ 41 လဆိုရင်လည်း မဟာစီမံကိန်းကြီးပြီးဖို ့စောနေတယ် ။
41 နှစ် ကတော ့ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်သေးတယ် ။ ( ခေါင်းဆောင်ကြီး နှင့်ပညာရှင်
များ အဖြေ 41 အတွက် ခေါင်းစားနေကြတယ်ပေါ့)
မင်းတို့Computer က မစွံပါဖူး ကွာ ။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့Computer ကို
ဂျာမဏီကမှာပြီး အဖြေပြန်ထုတ်ကြည် ့ကြမယ်... ဆိုပြီး
ဂျာမဏီက နောက်ဆုံးပေါ် Computer ကြီးထပ်မှာပြီး ပြန်တွက်ကြည် ့လိုက်တော့အဖြေ 41 ဘဲရတယ် ။ ဒါပေမဲ ့ဒီ Computer က စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် ။ 41 ကို Select လုပ်ပြီး
Enter ခေါက်လိုက်တော့ပြီးပြည် ့စုံတဲ ့အဖြေထွက်လာတယ်လေ ။ အဖြေကတော ့
41 = လေးသချေင်္ နဲ့ဂဘာတသိန်း
မှတ်ချက်။ Internet စီမံကိန်းများ အောင်မြင်ရေး အထောက်အကူပြု ....
အမုှဖြစ်ရင်....ကျွန်တော့သာလှမ်းအကြောင်းကြား...နော်...ကိုAlexander ရေ...အလကားလိုက်ပေးမယ်...Cyber law..နဲ ့ညိတဲ့ case မလိုက်ဖူးလို့...ဟီးဟီး...
ကိုယ့်မှာတော့ အဟုတ်မှတ်လို့ ဘလော့ပေါ်တောင်ကောက်တင်လိုက်တယ်. ခုတော့ :14:
ကျွန်တော် စတားလေးသည် အနှီပါပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြောစကားဆိုစကား၊ ကြေညာချက် များကို ဘယ်သောအခါမှမယုံတော့ပါဟုသစ္စာပြုပါသည်။ :d
သိပြီ..သိပြီ... မေလ မတိုင်ခင်က ကျောရိုးကြီး ပြင်နေတယ်ဆိုပြီး အဆ ၂၀ နှေးသွားတယ်.. အော်... ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားတော့ အဆ ၂၀ မြန်တာပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား.... အဆ ၂၀ မြန်တယ်ဆိုတာ သေချာအောင် အရင်ဆုံး အဆ ၂၀ ပြန်နှေးလိုက်တယ်လေ....
ကိုစေတန်ပြောသွားတာလဲ ဟုတ်တုတ်တုတ် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အင်တာနက် သုံးနိုင်စေချင်တယ်ဗျာ
ဘာသင်တန်း ညာသင်တန်း တက် ဘာလက်မှတ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ၀င်းဒိုးလောက်တောင် မတင်တက်
တဲ့ဘ၀က မြန်မြန်လွတ်ကြပါစေ .....
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်လဲ နိုင်ငံခြားမှာမှမနေနိုင်တာ။ ဒီမှာရှိနေတုန်း အဲ ... အသက်ရှင်နေတုန်းလေး အဆ 20 မြန်တာကြီးကို ကြုံရမယ်ဆိုတော့ ပြောရင်းပြောရင်း မြေးတောင် တန်းယူချင်နေတာ။
ဒီလောက် speed လေးနဲ့သုံးနေရတာကိုပဲဟုတ်လှပါပြီ..
တစ်နေ့တစ်လံပေါ့ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲဆိုသလို တစ်နေ့ 1kbs ပေါ့:65:
မှတ်ချက် ။ ။ နှေးသွားတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်:D
ဟိုနေ့ကတောင် အီးမေလ်းရောက်လာသေးတယ် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့တဲ့။ လျှပ်စစ်စက်ရုံအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလား။ အင်တာနက်လဲ အဲသလိုနေမှာပေါ့။ :d
ယုံလိုက်တော ့မယ် လို ့အဟီး:d:d
သူတို ့က ကောင်းဖို ့လုပ်တာပါဂျာ
ဒါ ပေ ့မယ်.. မကောင်းတာတွေ ဖြစ်ဖြစ်တွားတာဆိုးတာ..အဟီး :d:d:d:d
အိုး.. အရင်က ဇာတ်လမ်းလေး.. မေ့လိုက်ပါ.. အရင်က ဇာတ်လမ်းလေ..
wifi တုန်းကလည်း ဒီလိုပြောတာပါပဲနော်:P
သူတို ့ပြောတိုင်းသာ ယုံနေရရင်တော ့လား ...ဟင်းဟင်း..မပြောလိုက်ချင်ဘူး...
Cable ပြင်တုန်းက တော ့စောင့်လိုက်ရတာ ... မြန်လာမလားကြည့်တော ့မြန်မလာဘူး..
ဘာတွေ လုပ်လို ့လုပ်မှန်းမသိပါဘူးး...
အခုလောလောဆယ်တော ့ဒီ ကွန်နက်ရှင် လောက်နဲ ့ပဲ ကြေနပ်လိုက်ပါတော ့မယ်ဗျာ...
Alexander ဂျီး ဂုရု ကနေ စွမ်းအားပြည့်ပညာရှင် တောင် ဖြစ်သွားပြီ။
Internet ကို အဆ ၂၀ မြှင့်နိုင်မဲ့ Software ကိုယ့်ဘာသာ တီထွင်ပြီး သုံးလေ ... :P:P
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဘယ်တော့များရမလဲလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တာ။ အီးဟီးဟီး အနော့်လိုပါပဲလား။ အကုန်လုံးညည်းနေကြတာ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် အမ်ပီတီ အေဒီအက်စ်အယ် က ဘာဖြစ်တာလဲဟင် သိတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောကြပါအုံး အဆ၂၀ မြန်တာမဟုတ်ဘူး။ အဆ၂၀၀ လောက်နှေးနေလို့။ စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ။
p.s - ကိုအလှည့်စန္ဒားယားရေ
သူများ နာမည်အဖျက်ခံရတော့ ရယ်တယ်။
ကိုယ်အလှည့်ကျမှ .... အလှည့်စန္ဒရားမဟုတ်ပဲ အလှည့်ပန်းခက် ဖြစ်နေမယ် ...
နော် ... မဲပန်းခက် ... :d
သူများက MZ ထဲကို ၀င်၀င်ချင်းကတည်းက နာမည်အဖျက်ခံရပြီးသား...
ညလေးက စဖျက်တာကို ကိုဒီဘီကြီးက နောက်က လိုက်တယ်..
အခု Endless Love ကစဖျက်တော့ပန်းခက်ကအဖော်ရအောင် နောက်ကလိုက်ပေးတာ..:D:D:D
P.S မဲပန်းခက်တော့မဟုတ်ဘူး . ညိုရုံလေးပဲညိုတာ:P:P
Upgrade လုပ်ဖိုက နေးကွေးနေတာလိုထင်ပါတယ်... ကြားမိတာက ပထမ အနေနဲ Blue Coat Server တွေကို Remove လုပ်တော့မယ်တော့ကြားတယ် ပြီရင်တော့ Speed ကို Upgrade လုပ်ဖို လာမယ်ကြားပါတယ်...
:DBlue Coat မရှိတော့ရင်တော့ GMAIL တွေ HTTP မှာ S မ ထည့် ပဲတန်းခေါ လိုရမှာပါ
:39:Blue Coat မရှိတော့ Speed တော့နဲနဲတက်လာမယ်ထင်တာပဲ ...:39:
ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ gmail ကို ပေးသုံးချင်ရင် အစကတည်းက ရိုးရိုးလေးပေးသုံးမှာပေါ့ဗျာ။ အစကတည်းက ပေးမသုံးချင်လို့ ဂလိုတွေလုပ်ထားတာ သိရဲ့သားနဲ့များ။
“မျှော်တော်ယောင် မျှော်တော်ယောင် မျှော်တော်ယောင်ဘ၀ ကကျွတ်ချင်ပြီ -ုမကယ်ရင် -ုမကယ်ရင် မျှော်တော်ယောင်ဘ၀ ကကျွတ်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူး”
ဆရာရေ ... "P" တွေညိနေတယ်နော် .... :104:
Technology Only နော် ......
Blue Coat က ဘာလဲ Bro?
ကျနော်ကတော့ အခုမှပဲကြားဖူးတာ ... Blue Coat Server ဆိုတာ ... :106:
အင်တာနက် speed အဆ 20 မြန်မယ် ?
အဲလို ပြောသွားတဲ့ လူကြီးက speed ဆိုတာ ရော ဘာမှန်းသိရဲ့လားဗျာ အင်တာနက်ဆိုတာရော ဘာမှန်းသိရဲ့လားဗျာ
သူလဲ သူများပြောခိုင်းတာပြောရတာဆိုတော့ အပြစ်မဆိုသာပါဘူးလေ
ခုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီမျှော်လင့်ချတ်လေးနဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့ရတာ မှားပေါ့
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဇွတ်ကို ယုံခဲ့မိတာပါဗျာ ((((((
လူတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံး အကြိမ် လိမ်ရင် လိမ်တဲ့သူမှာ အပြစ်ရှိတယ်။
အဲဒီလိမ်တဲ့သူက အလိမ်ခံရတဲ့လူကို ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်လိမ်ခဲ့ရင် နှစ်ယောက်စလုံး အပြစ်ရှိတယ်။
တတိယ အကြိမ်ဆိုရင်တော့ လိမ်တဲ့သူမှာ အပြစ် လုံးဝမရှိတော့ဘူး။
လိမ်မယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ စောင့်မျှော်သူမှာသာ အပြစ်ရှိပါတယ်။
ဒီ Photo က gtalk ၀င်နေရင်နဲ့သေသွားတာ ဖြစ်မယ်
<a href="http://s189.photobucket.com/albums/z24/winyinphyu/?action=view&current=slow-internet-connection-771988bmp.jpg"; target="_blank"><img src="http://i189.photobucket.com/albums/z24/winyinphyu/slow-internet-connection-771988bmp.jpg"; border="0" alt="Photobucket"></a>
အင်တာနက် အဆ ( ၂၀ ) လား မမြန်လိုက်ပါနဲ့ဗျာ .............. တော်ကြာ မီးအားကျနေတာလေးပါ .... အင်တာနက်ထဲမြောသွားလို့ ...................... အဟင့်.:d:d... သိတယ်မဟုတ်လား အင်တာနက်က အရမ်းမြန်တော့ ............ မီးအားကကျတယ်လေ အဲတော့ အချိုးအစားမညီတော့ မီးအားက အင်တာနက်ထဲကို ပြန်စီးသွားတာ.................... အဲဒါနဲ့ အဲဒါနဲ့:d:d
သီးခံကြပါ သီးခံကြပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း Internet သုံးစွဲကြသော ရဟန်း ရှင် လူ , သီလရှင် ပြည်သူများအတွက် ...
အခါတပါးမှာ ခိုးသား ဓါးပြတွေ ကြီးစိုးနေတဲ့နေရာကိုမှရွေးပြီး တရားသွားအားထုတ်ချင်တဲ့ရဟန်းတပါးကို မြတ်ဘုရားရှင်က ခေါ်တွေ ့့ပြီး မေးမြန်း ဟောပြော မှုပြုပါတယ် ။
ဘုရား > ငါ ့ရှင် ခိုးသား ဓါးပြတွေက အသင် ့ကို ကြမ်းတမ်းစွာဆဲရေးတဲ ့အခါ ဘယ်လို
ရဟန်း> ဆဲရုံသာဆဲတာ ရိုက်ပုတ်မှုမလုပ်လို့တော်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းပါ ့မယ် ။
ဘုရား> ရိုက်ပုတ် နှိပ်စက်ရင်ကော ဘယ်လို နှလုံးသွင်းမလဲ ။
ရဟန်း> ရိုက်ရုံသာရိုက်တာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို မချိုးဖဲ့မဖြတ်တောက်လို ့တော်ပါသေးတယ်လို ့
နှလုံးသွင်းပါ ့မယ် ။
ဘုရား> ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို ဖြတ်တောက် နှိပ်စက််ခဲ ့ရင်ကော ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ ။
ရဟန်း> ဖြတ်ရုံသာ ဖြတ်သာ အသေမသတ်လို ့တော်ပါသေးတယ် ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းပါ ့မယ် ။
ဘုရား> သေအောင်သတ်ခဲ ့ရင်ကော ဘယ်လို နှလုံးသွင်းမလဲ ။
ရဟန်း> တနေ ့ကျသေရမှာဘဲ သူတို ့ကြောင့်မြန်မြန် ၀ဋ်ကျွတ်ရပေတယ်လို ့ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းပါ ့မယ် ။
မြတ်ဘုရားလည်း ရဟန်းရဲ့ဆင်ခြင်သီးခံနိုင်မှုကိုစိတ်ချပြီး ရဟန်းသွားလိုရာအရပ်ကို ခွင် ့
မြန်မာပြည်မှာ Internet အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အထက်ကဖော်ပြခဲ ့တဲ့ရဟန်းတော်လို သီးခံနှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ဖို ့လိုအပ်ပါတယ် ။
ဒါမှ စိတ်ညစ်/စိတ်ပျက်မှု ဒေါသတွေ တစစလျော ့နဲပြီး သီးခံနိုင်စွမ်း ပြည် ့၀တဲ့အမျိုးကောင်းသား/သမီးတွေ ဖြစ်လာမှာအမှန်ပါ ။
ဒါကြောင့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ ့အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ ့ရင်ဖြင့်သင်ဟာ Internet သုံးစွဲရင်း ကုသိုလ််စိတ်တွေ တိုးပွားရရှိနိုင်ပါစေဟု စေတနာအရင်းခံဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည် ။
1. သင်အသုံး ပြုနေတဲ့Internet ရဲ့နှေးကွေး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းမှုတွေက သင် ့ကို စိတ်တို စိတ်ပျက် ဒေါသထွက်အောင် ဖန်တီးနေတယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ ။
သင်> အော် ... နှေးကွေး လေးလံရုံလေးပါ ဖွင် ့ကြည် ့လို ့ရလို ့့တော်ပါသေးရဲ ့့ ဆိုပြီးနှလုံး သွင်းပါ ့မယ်။
2. သင်ကြည် ့ချင်တဲ့Site ကို Ban ထားခဲ ့ရင် သင်ဘယ်လို နှလုံးသွင်းမလဲ ။
သင်> သည် Site ကို မကြည် ့သင် ့လို့Ban တာဘဲ တခြား Site တွေကြည် ့လို ့ရလို့တော်သေးတာပေါ ့ဆိုပြီး နှလုံးသွင်းပါ ့မယ် ။
3. ISP Server Down လို့Internet အဆက် လုံး၀ပြတ်သွားတာမျိုးနှင် သင်ကြုံခဲ ့ရင် ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ ။
သင်> တချိန်ချိန်တော့ပြန်ရတန်ကောင်းရဲ ့လို့နှလုံးသွင်းပြီး သီးခံစောင် ့နေပါ ့မယ် ။
4. သင်ဟာ Complaint များတဲ ့အတွက် သင် ့ရဲ ့Internet Access ကို အပြီး ရပ်စဲခြင်း ခံရရင် ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ ။
သင်> တနေ ့တနေ့ISP Server Down သွားမလား / Upgrade လုပ်တယ်ဆိုပြီး အဆက်ပြတ်သွားမလား / Exchange Black Out ဖြစ်သွားမလား /
... စသည့်စိုးရိမ်ပူပန်ထိတ််လန် ့မှု တွေက လွတ်ကင်းသွားတယ်လို ့ဘဲ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပါ ့မယ် ။
# Internet အသုံးပြုကြသူများ `သီးခံမှုထား ကုသိုလ်ပွားကြပါစို ့` !!
ဟုတ်ကဲ့ အင်တာနက်သွားနှုန်းမြန်အောင်တဲ့ ကျောရိုးမှာ မော်တာတပ်မယ်ပြောတာပဲ
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အချိန်တန်လျှင် bill တော့ ဆောင်ရမည်..............\_:D/
မကြေနပ်လျှင် တိုင်ရန် နေရာ မရှိ:101::68:
(ဟုတ်တယ်နော် ကျုပ်တို့ ဘ၀က):77:
မနေနိုင်လို့တစ်ခွန်းတော့ ပြောပါရစေဗျာ အဆနှစ်တော့မသိဘူး အနှစ်
ဆောရီးဗျာ Admin များခင်ဗျာ မနေနိုင်လွန်းလို့ပါ
အထက်က ကျွန်တော်ရေးခဲ ့တဲ့Post ကို ဖတ်ပြီး နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ ။
paysuu wrote: »
မသိသေးတဲ ့သူတွေလည်း သိသွားတော့ပိုပြီးအကျိုးပါတယ် ။
ဘ၀တပါး ပြောင်းလည်းသွားတဲ့နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင် ရဲ့သီးချင်းကို သွားသတိရမိပါတယ် ။
သီချင်းအမည်ကတော့ခွင် ့မတောင်းပေမဲ့ရပါတယ်
ဂျောက်ထဲကျမှာဆိုးလို့လဲ ကယ်ခဲ့ရပီးဘီ:5::5: ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့ --- ကြီးဖစ်အောင်တီးဆောက်နေတာဘဲလေ.:71::71::71:.သူများတွေ အဆင့်မြင့်နေဘီလာမပြောနဲ့ တို့က သူများထက်မြင့်အောင်တီးဆောက်ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်း ခိုင်အောင် တွင်းနက်နက်တူနေတာနိပ်ကျနေတာဟုတ်ဝူး:68::68:ခဏတော့ စောင့်ပေါ့ ကွယ်:)):)):)):)):)) မကြာမှီလာမည်မျှော်ပေါ့....\_:d/\_:d/\_:d/
ဦးပေါ်ဦး ရဲ့ ပုံပြင်တပုဒ် ဖတ်ရဘူးပါတယ်။ အပြည့်အစုံတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။
ဘိုးတော်ဘုရား ဆီကို် တိုင်းတတိုုင်းက ဆင်ဖြူတော် ဆက်သပါတယ်ဆိုပြီ ဆင်တကောင်ကို ဆက်သလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် ဆင်ထိန်းတွေက စစ်လိုက်တော့ ဆင်ဖြူမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရော။ အဲဒါကို ဘုရင်ကြီးသိသွားရင် အမျက်တော်ရှမှာစိုးတာရော ၊ စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှာစိုးတာရောကြောင့် မလျှောက်ရဲကြဘူး ။အဲဒီတော့ ဦးပေါ်ဦးကို အကြံညဏ်တောင်းရတာပေါ့။ဦးပေါ်ဥိးက သူကြည့်လျှောက်ုလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။
အဲလိုနဲ့ ဘုရင်ကြီးဆင်တင်းကုပ် ကိုလာတော့ ဒီဆင်ဟာ ဆင်ဖြူတော် ဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးတယ်။အဲဒီမှာ ဦးပေါ်ဦးက "မှန်ပါ့..ဘုရား ၊အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကြောင့် ဒီဆင်ဟာ နောင် အနှစ် ၆၀ ကြာရင် ဧကန် ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်လာမှာပါ ဘုရား " ဆိုပြီးလျှောက်လိုက်တယ်။ နောင် အနှစ် ၆၀ ဆိုရင် ဘုရင်လဲသေပြီ ၊ လျှောင်တင်တဲ့ သူဦးပေါ်ဦးလဲသေပြီလေ။ ဆင်လဲ သေပြီပဲ။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ဘုရင်ကြီး ကျေနပ်သွားတာပေါ့။ (မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမယ့်လည်း)
ဟဲ အဲဒီလိုပါပဲ ၊ နောင် ၁နှစ် ၂နှစ် ၃နှစ် ....၁၀နှစ် ၂၀နှစ် ဆိုရင်အင်တာနက် speed တွေဟာ မြန်လွန်းလို့ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ၀ုန်းကနဲဆို ကျလာမှာပါ။ 100Gbps တွေတောင် ရချင်ရမှာပါ လို့ ပြောချင်ရင်တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟဲဟဲ ..အဲဒီအခါကျ ပြောတဲ့လူလဲ 0..................လေ၊ ခုချိန်နားထောင်ခဲ့တဲ့ ကျတော် တို့လဲ ...............လေ။ speed ကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး ????????????
မှာခဲ့ချင်ပါတယ်....ငါ့မြေးများ အင်တာနက်သုံးရင်လေ ...အင်တာနက်...ဆိုတာဟာ တကယ်သုံးတတ်ရင် သည်းခံခြင်း ပါရမီ ကို ဖြည့်စည်းပေးတဲ့အရာပါလို. ။...........
ဒီမြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက် အစကတည်းက မရှိရင် ခပ်ကောင်းကောင်းဗျ။ အခုတော့ ရှိလို့သုံးတယ်။ သုံးတော့ စောင့်ရတယ်။ စောင့်ရတော့ မသုံးချင်ဘူး။ မသုံးပဲလဲ မနေနိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးနဲ့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ဖြစ်နေတော့ခက်တယ်။ ဒီတော့လည်း မော်တော်ကားသမားတွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကိုပဲ ရွတ်ပြီးသုံးနေရတယ်။
စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် သုံးရန်အင်တာနက် :d:d:d
ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းပြောပြီး ဖြစ်အောင်လုပ်မပြနိုင်တဲ့ လူတွေကိုတော့ ):)):)) ဆိုပြီး လှောင်ရယ်ချင်တယ်ဗျာ။
( သားပြောတာလည်း ဟိုဟာရေး မပါဘူးနော်. မီးလေးမှန်မှန်လာလို့ အင်တာနက်လေး မြန်မြန်သုံးနေရရင် ကျေနပ်ပါပြီ )
အဲဒါမပြောပါနဲ့ နည်းနည်းများပါတယ်ဗျာ။ Standard Keyboard မှာ key ဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတာ လေးပဲ အရင်မေးကြည့်ပါဦး။ မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် နည်းနည်း အထင်ကြီးပေးမယ်လို့ ):)):)):))
( တော်ပီတော်ပီ ပြောတော့ဘူး )
):)) ဟုတ်တာမှသိပ်ဟုတ်.. သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ.. )
အင်းခုလောက်ဆို အမြန်နှုန်းတွေကမြှင့်ပြိးနေပါပြီ ။သူဆို့ဆာဗာနဲ့ကျွန်တော်တို့က အလင်းနှစ်တွေဘယ်လောက်ကွာလို့ ကျွန်တော်တို့က မြေးအထိစောင့်၇မလဲသိဘူးနော်ဂျာ
bill ဆောင်၇တာတော့နီးနီးလေး နော် တမျိုးကြီး ဟယ်